Shir madaxeedkii Hogaamiyayaasha NATO oo ku soo dhamaaday magaalada London… – Hagaag.com
Shir madaxeedkii Hogaamiyayaasha NATO oo ku soo dhamaaday magaalada London…
Posted on 5 Diseembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Hogaamiyayaasha gaashaanbuurta NATO ayaa soo gaba-gabeeyey shir madaxeed labo maalin uga socday duleedka London, waxaana ay soo saareen war-murtiyeed ay ku midaysan yihiin inkastoo la arkayey xiisadda ka dhex aloosan qaar kamid ah hogaamiyayaasha NATO. Shirkan ayaa kusoo beegmaya 70 guuraddii kasoo wareegtay markii la aas aasay isbahaysigan milatari.
Hogaamiyayaasha ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ‘si loogu noolaado amni waa in aan si wada jir ah u eegnaa Mustaqbalka wada jirkeena’.
Ra’iisul Wasaare Boris Johnson oo ka hadlayay shirka ayaa sheegay in ay horay u socon doonto NATO.
“70 sano ayaan ku soconnaa, waanu ku ad adagnahay go’aankeena Isbahaysiga NATO iyo in aynu nahay awood mid ah oo si wada jir ah u ilaalisa 29-ka dal oo ku dhow hal bliyan oo qof, xaqiiqadu waxaa ay tahay in aan nabad-galyo ku noolnahay maanta, waana arrin muujinaysa ujeedka isbahaysigan, ma jiro qof rajayn kara in uu na jabiyo, sidaasi daraadeed ma dhici karto in cidina ay na weerarto.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa baajiyay shir jaraa’id oo uu la qaban lahaa Ra’iisul Wasaaraha Britain, Boris Johnson kadib markii lasoo gaba gabeeyay shirka NATO. Trump ayaa shirkaasi uga baaqday kadib markii xalay la baahiyay muuqaal Ra’iisul Wasaaraha Canada, Justin Trudeau oo xamanaya Trump xilli ay la kulan sanaayeen boqoradda dalka Britain.